Paul's Letter to the Galatians – 2azụ
Home / Bible / Akwukwo ozi / Paul's Letter to the Galatians
1:1 Paul, Onyeozi, ọ bụghị site n'aka ụmụ mmadụ ma ọ bụghị site na nwoke, ma site na Jizọs Kraịst, na Chineke, bụ Nna, onye mere ka osi na ndi nwuru anwu,
1:2 na ụmụnna nile ndị so m: ka ụka ndị nke Galetịa.
1:3 Grace na udo unu n'aka Chineke bụ Nna, na site na Onyenwe anyị Jizọs Kraịst,
1:4 onye nyere onwe ya na nnọchite nke mmehie anyị, nke mere na o wee napụta anyị site na nke a ajọ afọ, dị ka uche Chineke bụ Nna anyị.
1:5 Ya bụ ebube ruo mgbe ebighị ebi ma na mgbe. Amen.
1:6 M na-eche na ị ndidi otú ahụ ngwa ngwa bufee, si ya na-akpọ gị n'ime amara nke Christ, n'elu ọzọ gospel.
1:7 N'ihi na ọ dịghị ọzọ, ma e wezụga na e nwere ụfọdụ mmadụ na-ichegbu ị na-achọ na-ịkụghasị na ozioma Kraist.
1:8 Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla, ọbụna anyị onwe anyị ma ọ bụ mmụọ ozi si n'eluigwe, ga-ekwusa ozi gị a gospel ndị ọzọ karịa nke onye na anyị na-ekwusa gị, ka ọ diri anathema.
1:9 Dị nnọọ ka anyị kwuru tupu, mere ugbu a na m na-ekwu ọzọ: Ọ bụrụ na onye ọ bụla emewo ha ziri ozi ọma ka i, ndị ọzọ karịa nke ị natara, ka ọ diri anathema.
1:10 N'ihi na am m now kwenye ikom, ma ọ bụ Chineke? Ma ọ bụ, M na-achọ ime ikom? Ọ bụrụ na m ka na-na-atọ ezi ụtọ ikom, mgbe ahụ m ga-enwe onye na-ejere Kraịst.
1:11 N'ihi na m ga-ị na-aghọta, ụmụnna, na Gospel nke e kwusara site m na-adịghị dị ka nwoke.
1:12 Na m na-enweta ya site na nwoke, mụ amụta ya, ma ọ bụghị site na mkpughe nke Jizọs Kraịst.
1:13 N'ihi na ị nụrụ nke m na mbụ omume n'ime Judaism: na, -enweghị atụ, Esogburu m Church nke Chineke wee buso ya.
1:14 Na m emewokwa Judaism gabiga ọtụtụ n'ime m ahaghị n'etiti onwe m ụdị, ọ pụtara ịbụ ihe dị ukwuu ịnụ ọkụ n'obi n'ebe n'ọdịnala nna nna m hà.
1:15 Ma, mgbe ọ dị mma n'anya ya na-, si m n'afọ nne, adaala m iche, na onye kpọrọ m site n'amara ya,
1:16 ikpughe Ọkpara ya n'ime m, ka m wee agbasa ozi ọma ya n'etiti mba, M na-esote achọ nkwenye nke anụ ahụ na ọbara.
1:17 Enweghi kwa M na-aga Jerusalem, nye ndi Ndịozi n'irum. Kama, M wee banye Arabia, na-esote m laghachiri Damascus.
1:18 Ọzọkwa, mgbe afọ atọ, M wee gaa Jeruselem Peter; na m nọrọ iri na ise ụbọchị.
1:19 Ma m hụrụ na ọ dịghị nke ndị ọzọ Ndịozi, ma e wezụga James, -nne Onye-nwe.
1:20 Ugbu a ihe m na-edetara unu akwụkwọ: le, n'iru Chineke, Adịghị m dina.
1:21 Osote, M wee banye n'ógbè ndị dị na Siria na Silishia.
1:22 Ma m na-amaghị ama site iru-ụka nke Judia, nke di nime Kraist.
1:23 N'ihi na ha nanị nụrụ na: "Ọ, onye ekesikọbọde anyị, ugbu a evangelizes okwukwe ahu nke otu ugboro lụrụ ọgụ. "
1:24 Ha nye Chineke otuto na m.
Ndị Galeshia 2
2:1 Osote, mgbe afọ iri na anọ, M wee ruo Jeruselem ọzọ, ewere na Banabas na Titus.
2:2 Na m gara, dị ka mkpughe, na m na-arụrịta ụka na ha banyere Oziọma ahụ m na-ekwusa ozi ọma n'etiti ndi mba ọzọ, ma n'ebe ndị ahụ asị na ha na-abụ ihe, ka aghara ikekwe m nwere ike na-agba ọsọ, ma ọ bụ na-agba ọsọ, n'efu.
2:3 Ma ọbụna Taịtọs, bụ onye ya na m, ezie na ọ bụ onye Jentaịl, e manyere úgwù,
2:4 kama ọ bụ naanị n'ihi ụmụnna ụgha, onye e webatara n'amaghị ama. Ha banyere na nzuzo iledo na anyị nnwere, nke anyị nwere n'ime Kraịst Jizọs, ka ha wee belata anyị ka anyị ghara inwere.
2:5 Anyị na-adịghị ikwenyere ha ido onwe ha n'okpuru, ọbụna ruo otu awa, ka eziokwu nke ozi ga-anọgide na unu,
2:6 na-agbara ndị na-asị na ha na-abụ ihe. (Ihe ọ bụla ha nwere ike ịbụ otu ugboro, ọ pụtara ihe ọ bụla m. Chineke adịghị anabata aha nke a nwoke.) Na ndị na-azọrọ na ha ihe nwere ihe ọ bụla na-enye m.
2:7 Ma ọ bụ Kama nke ahụ, ebe ọ bụ na ha hụrụ na ozi-ọma na-ebighị úgwù e nyere m, dị nnọọ ka Oziọma úgwù e nyere na-Peter.
2:8 N'ihi na onye na-arụ ọrụ ndị ka onyeozi nke ndị úgwù Peter, na-arụ ọrụ m n'etiti mba.
2:9 Ya mere, mgbe ha kwetara na amara nke e nyere m, James na Sifas na Jọn, bụ ndị yiri ogidi, nyere m, ka m Barnabas aka-nri nke mkpakọrịta, nke mere na anyị ga-aga na nke ndị Jentaịl, mgbe ha gara biri úgwù,
2:10 -arịọ naanị na anyị kwesịrị iburu n'uche nke ndị ogbenye, nke bụ ihe ah nke m bụ solicitous ime.
2:11 Ma mgbe Kifas we biarue ebe Antioch, M guzo imegide ya ka ihu ya na, n'ihi na ọ bụ blameworthy.
2:12 N'ihi na tupu ụfọdụ ndị rutere si James, o rie ya na ndi mba ọzọ. Ma mgbe ha ruteworo, ọ dọtara iche na kewapu onwe-ya, atụ egwu ndị na-úgwù ahụ o biri.
2:13 Na ndị ọzọ na ndị Juu kwere ime ka hà, nke mere na ọbụna Banabas nọ na-edu ha na falseness.
2:14 Ma mgbe m hụrụ na ha adịghị agazi n'ụzọ ziri ezi, site eziokwu nke Oziọma, M wee sị Kifas n'ihu onye ọ bụla: "Ọ bụrụ na ị, mgbe ị bụ onye Juu, na-ebi dị ka ndị mba ọzọ na ọ bụghị ndị Juu, olee ihe mere i amanye ndị mba ọzọ na-omenala ndị Juu?"
2:15 site n'okike, anyị bụ ndị Juu, na nke ndi mba ọzọ, mmehie.
2:16 Na anyị maara na nwoke na-adịghị n'onye ezi omume site n'ọrụ nke iwu, kama ọ bụ naanị site n'okwukwe nke Jizọs Kraịst. Ya mere, anyị kwere na Kraist Jisus, ka anyị pụrụ izi ezi site n'okwukwe nke Kraist, na ọ bụghị site ọrụ nke iwu. N'ihi na ọ dịghị anụ a ga-agu n'onye ezi omume site n'ọrụ nke iwu.
2:17 Ma ọ bụrụ na, mgbe achọ izi ezi ka Christ, anyị onwe anyị na-hụrụ na-mmehie, ga-Christ ịbụ onye ozi nke mmehie? Ka ọ ghara ịbụ otú!
2:18 N'ihi na ọ bụrụ na m wughachi ihe na m ebibi, M na iru onwe m dị ka a prevaricator.
2:19 N'ihi na site na iwu, Aghọwo m nwụrụ anwụ ka iwu, ka m wee dị ndụ n'ihi na Chineke. M na a kpọgidere ya cross na Kraịst.
2:20 m na-ebi; ma ugbu a,, ọ bụghị m, ma n'ezie Christ, bụ onye bi na m. Ma ọ bụ ezie na m dị ndụ ugbu a n'anụ, M na-ebi okwukwe nke Ọkpara Chineke, onye hụrụ m n'anya ma nyefee onwe ya maka m.
2:21 M ajụla amara nke Chineke. N'ihi na ọ bụrụ na ikpe ziri ezi bụ site na iwu, mgbe ahụ Kraịst nwụrụ n'efu.
Ndị Galeshia 3
3:1 O nzuzu Galeshia, bụ onye akpaliwo mmasị gị na ị ga-erubere eziokwu ahụ isi, ọ bụ ezie na Jesus Christ a n'ihu n'ihu unu, kpogidere n'etiti unu?
3:2 M na-achọ ịma naanị nke a si gị: Ùnu natara Mọ site ọrụ nke iwu, ma ọ bụ site na nti nke okwukwe?
3:3 Mere gị nzuzu na, ezie na ị malitere na Mọ, ị ga-now-akwụsị mgbe anụ ahụ?
3:4 Ị na-ata ahụhụ nke ukwuu na-enweghị a mere? Ọ bụrụ otú ahụ, mgbe ahụ, ọ bụ n'efu.
3:5 Ya mere, na Chineke, onye ekesa Mọ gị, na-arụ ọrụ ebube n'etiti unu, -eme omume site ọrụ nke iwu, ma ọ bụ site na nti ndi-okwukwe?
3:6 Ọ dị nnọọ ka e dere,: "Abraham kweere na Chineke, na e reputed ya si ikpe ziri ezi. "
3:7 Ya mere, mara na ndị na-okwukwe, ndị a bụ ụmụ ndị ikom Abraham.
3:8 N'ihi ya Akwụkwọ Nsọ, N'ibu ụzọ hụ na Chineke ga-yie ndị ziri ezi ndi mba ọzọ site n'okwukwe, buru amụma na Abraham: "Mba nile ga-agọzi n'ime gị."
3:9 Ya mere, ndị na-okwukwe bu onye agọziri agọzi na-ekwesị ntụkwasị obi Abraham.
3:10 N'ihi na ka ha ra nke ọrụ nke iwu bụ ndị a bụrụ ọnụ. N'ihi na a dere: "Onye a bụrụ ọnụ na onye ọ bụla nke na-adịghị anọgide na ihe nile e dere n'akwụkwọ nke Iwu, wee mee ha ihe. "
3:11 Na, ebe ọ bụ na iwu dịghị onye a kpasuru ya na Chineke, nke a bụ pụta ìhè: "N'ihi na dị nnọọ nwoke n'adi ndu site n'okwukwe."
3:12 Ma iwu abụghị nke okwukwe; kama, "Ọ na-eme otú a ga-adị ndụ site na ha."
3:13 Kraist agbaputawo ayi site n'obubu onu nke iwu, ebe ọ bụ na ọ ghọrọ onye na obubu onu n'onodu ayi. N'ihi na e dere: "Onye a bụrụ ọnụ na onye ọ bụla na-ekokwasị si a osisi."
3:14 Nke a bụ nke mere na ngọzi nke Abraham nwere ike iru ndi mba ọzọ nime Kraist Jisus, ka anyị wee nata nkwa nke Mọ site n'okwukwe.
3:15 Brothers (M na-ekwu dị ka nwoke), ma ọ bụrụ na a nwoke agba e enen, ọ dịghị onye ga-ajụ ya ma ọ tụkwasịkwa ihe na ya.
3:16 The promises were made to Abraham and to his offspring. He did not say, “and to descendents,” as if to many, ma kama, as if to one, o kwuru, sị, “and to your offspring,” who is Christ.
3:17 Ma m na-ekwu nke a: the testament confirmed by God, nke, after four hundred and thirty years became the Law, does not nullify, so as to make the promise empty.
3:19 Why, mgbe ahụ, was there a law? It was established because of transgressions, until the offspring would arrive, to whom he made the promise, ordained by Angels through the hand of a mediator.
3:21 Ya mere,, was the law contrary to the promises of God? Ka ọ ghara ịbụ otú! For if a law had been given, which was able to give life, n'ezie ikpe ziri ezi ga-adị nke iwu.
3:22 Ma Akwukwo Nso nchọ ihe niile n'okpuru mmehie, nke mere na nkwa, site n'okwukwe nke Jizọs Kraịst, e wee nye ndi kwere.
3:23 Ma tupu okwukwe ahụ abịarute, anyị e chebere site na ime nchọ n'okpuru iwu, si na okwukwe nke bụ ikpughe.
3:24 Na otú iwu bụ anyị onye nlekọta na Christ, ka anyị wee zie ezie site n'okwukwe.
3:25 Ma ugbu a, na okwukwe ahụ abịala, anyị anọkwaghị n'okpuru a nlekọta.
3:26 N'ihi na unu niile bụ ụmụ nke Chineke, site n'okwukwe nke di na Christ Jesus.
3:27 N'ihi na dị ka ọtụtụ n'ime gị dị ka e mere baptizim n'ime Kraịst ejupụtawo n'ìgwè Christ.
3:28 Onye Ju ma obu onye Grik; na e nweghị orù ma ọ bụ free; e nweghịkwa nwoke ma ọ bụ nwaanyị. N'ihi na unu nile bụ otu n'ime Kraịst Jizọs.
3:29 Ma ọ bụrụ na ị bụ Kraịst, ya mere unu mkpụrụ Abraham, ndị nketa dị ka nkwa.
Ndị Galeshia 4
4:1 Ma m na-ekwu na, n'oge onye nketa bụ nwa, ọ bụ ọ dị iche iche site na onye na-ejere, ọ bụ ezie na ọ bụ onye nwe ihe niile.
4:2 N'ihi na ọ nọ n'okpuru nduzi na nlekọta, ruo mgbe oge nke e buru ụzọ site nna.
4:3 Otú a kwa ka anyị, mgbe anyị bụ ụmụaka, e subservient na mmetụta nke ụwa.
4:4 Ma mgbe izu ezu nke oge rutere, Chineke zitere Ọkpara ya, kpụrụ si a nwaanyị, kpụrụ n'okpuru iwu,
4:5 nke mere na o wee napụta ndị nọ n'okpuru iwu, ka anyị wee nwee ike inweta doo nke umu.
4:6 Ya mere, n'ihi na unu bụ ụmụ, Chineke zitere Mọ nke Ọkpara ya n'ime obi unu, na-eti mkpu: "Aba, Nna. "
4:7 Na nke mere ugbu a na ọ bụghị nwa-okorọbia, ma a nwa. Ma ọ bụrụ na ọ bụ a nwa, mgbe ahụ, ọ bụkwa onye nketa, site na Chineke.
4:8 ma mgbe ahụ,, na-, mgbe na-amaghị atụmatụ nke Chineke, i jere ozi ndị na-, site n'okike, are not gods.
4:9 Ma ugbu a,, since you have known God, or rather, since you have been known by God: how can you turn away again, to weak and destitute influences, which you desire to serve anew?
4:10 You serve the days, and months, na ugboro, and years.
4:12 Brothers, Ana m arịọ gị. Be as I am. N'ihi na m, kwa, am like you. You have not injured me at all.
4:14 You did not despise or reject me. Ma kama, you accepted me like an Angel of God, even like Christ Jesus.
4:15 Ya mere, where is your happiness? For I offer to you testimony that, if it could be done, you would have plucked out your own eyes and would have given them to me.
4:16 Ya mere,, have I become your enemy by telling you the truth?
4:17 Ha anaghị eme ihe dị gị mma. Na ha dị njikere ewepu ị, ka unu wee na-eṅomi ha.
4:18 Ma na-eṅomi ezi ihe, mgbe niile na a ezi ụzọ, ma ọ bụghị naanị mgbe m nọ na ị.
4:19 My nta umu, M na-amụ nwa gị ọzọ, ruo mgbe Christ a kpụrụ na ị.
4:20 M na-eji ọchịchọ obi na-adị n'ebe ị, ọbụna ugbu a. Ma m ga-agbanwe olu m: n'ihi na abụ m ihere gị.
4:21 Gwa m, ị na-achọ ịbụ n'okpuru iwu, na unu agụghị iwu?
4:22 N'ihi na e dere na Abraham nwere umu-ndikom abua: otu a ka ohu nwaanyị, na otu a free nwaanyị.
4:23 Ọ bụ onye nke orù-a mụrụ dị ka anụ ahụ. Ma ọ bụ onye nke nwanyị ahụ nweere onwe mụrụ site ná nkwa.
4:24 Ihe ndia bayere site na akụkọ ifo. N'ihi na ndị a na-anọchi anya abụọ nke Agba. N'ezie, otu, n'ugwu Sainai, -enye nwa si n'agbụ, nke bụkwa Hega.
4:25 N'ihi na Sinai bụ ugwu dị n'Arebia, nke a na-metụtara Jerusalem nke ugbu a, ọ na-eje ozi na ụmụ ya.
4:26 Ma na Jerusalem nke di n'elu nwere onwe-; nke ahu bu nne anyị.
4:27 N'ihi na e dere,: "Ṅụrịa ọṅụ, O nwaanyị aga otu, ezie na ị na-adịghị atụrụ ime. Fewe wee na-eti mkpu,, ezie na ị na-adịghị amụ nwa. N'ihi na ọtụtụ ndị bụ ụmụ nke nkpọnkpọ, ọbụna ihe karịrị nke nwaanyị nwere di. "
4:28 ugbu a, anyị, ụmụnna, dị ka Isaac, bụ ụmụ nke nkwa.
4:29 Ma dị nnọọ ka mgbe ahụ, onye amuru dị ka anu aru sogburu onye nke a mụrụ dị ka Mmụọ, otú a kwa ọ bụ ugbu.
4:30 Ndien nso ke Akwụkwọ Nsọ na-ekwu? "Chupu nwaanyị orù na nwa ya nwoke. N'ihi na nwa a orù inyom agaghi bụrụ onye nketa na nwa a free nwaanyị. "
4:31 Ya mere, ụmụnna, anyị abụghị ụmụ ndị orù nwaanyị, kama nke free nwaanyị. Na nke a bụ nnwere onwe na nke Kraịst emewo ka anyị free.
Ndị Galeshia 5
5:1 guzosie ike, na adịghị njikere a ga-ọzọ nke onye yoke nke n'agbụ.
5:2 Le, M, Paul, sị gị, na ọ bụrụ na ị na-úgwù, Kraịst ga-adịghị aba uru ka i.
5:3 N'ihi na m ọzọ ịgba akaebe, banyere nwoke ọ bula úgwù onwe ya, nte ke obiomo ime ihe dị ka dum iwu.
5:4 Na a na-bupụrụ nke Kraịst, gị onye a na-agu n'onye ezi omume na ha nime iwu. I siworo amara.
5:5 N'ihi na mọ-, site n'okwukwe, anyị na-eche na olileanya nke ikpe ziri ezi.
5:6 N'ihi na n'ime Kraịst Jizọs, ma ibi úgwù ma ọ bụ ebighị úgwù ahụkarị omume banyere ihe ọ bụla, ma nanị okwukwe nke na-arụ ọrụ site ọrụ ebere.
5:7 Ị na-agba ọsọ nke ọma. Ya mere, ihe impeded ị, na ị ga-erubere eziokwu ahụ isi?
5:8 Nke a na ụdị mmetụta bụghị site n'aka ya onye na-akpọ gị.
5:9 A ntakịrị ihe iko achịcha na-emerụ ahụ dum koro.
5:10 Enwere m obi ike na ị, n'ime Onyenwe anyị, na ị ga-anabata ụdị ihe ahụ. Otú ọ dị, ọ na-enye gị nsogbu gēbu kwa ikpé, onye ọ nwere ike ịbụ.
5:11 Ma mụ, ụmụnna, ma ọ bụrụ na m ka na-ekwusa ozi ọma ibi úgwù, Gịnị mere m ka na-ata ahụhụ mkpagbu? N'ihi na mgbe ahụ ndị asịrị nke Cross dịrị efu.
5:12 M ka ya bụrụ na ndị na-ichegbu ị ga-efopụkwa ndị.
5:13 Maka gị, ụmụnna, a na-akpọ ka nnwere. Naanị ị ga-eme ka nnwere onwe n'ime otu oge maka anụ ahụ, ma kama, -eje ozi ibe site na ọrụ ebere nke Mmụọ Nsọ.
5:14 Maka dum iwu na-emezu otu okwu: "Ị ga agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị."
5:15 Ma ọ bụrụ na ị ata aru ma-eripịa ibe, kpachara anya ka ị na-agaghị gwusia site ibe!
5:16 Ya mere,, M na-ekwu: Ije na mmụọ, na ị ga-gaghị na-emezu ọchịchọ anụ ahụ.
5:17 N'ihi na anụ ahụ na-achọ ka megide mmụọ nsọ, na Mmụọ Nsọ megide anụ ahụ. Na ebe ọ bụ na ndị a bụ megide ibe, nwere ike ị gaghị eme ihe ọ bụla ị chọrọ.
5:18 Ma ọ bụrụ na ị na-edu site na Mọ Nsọ, unu anọghị n'okpuru iwu.
5:19 Ma ọrụ nke anụ ahụ pụtara ìhè; ha bụ: ịkwa iko, abịa, nwoke idina nwoke, n'imeju ọchịchọ onwe,
5:20 na-eje ozi nke arụsị, ọgwụ ọjọọ, iro, esemokwu, ekworo, iwe, Ise-okwu, esemokwu, nkewa,
5:21 ekworo, igbu ọchụ, inebriation, ịga oriri oké mkpọtụ, na yiri ihe. Banyere ihe ndị a, M ka na-ekwusa ozi gị, ka m ezisara unu: na ndị na-eme n'ụzọ dị otú a agaghi-enweta ala-eze Chineke.
5:22 Ma nkpuru nke Mọ Nsọ bu ọrụ ebere, ọṅụ, udo, ndidi, mfọnido, ịdị mma, ndidi,
5:23 umeala n'obi, okwukwe, imeru, abstinence, ọcha. Ọ dịghị iwu na-emegide ihe ndị dị otú.
5:24 Maka ndị na-Kraịst nwere kpogidere n'anụ ahụ ha, tinyere ya omume ọjọọ na ọchịchọ.
5:25 Ọ bụrụ na anyị na-ebi site na Mọ Nsọ, anyị kwesịrị kwa ije site na Mọ Nsọ.
5:26 Ka anyị ghara ịbụ achọ efu ebube, akpali iche ibe, enwere ibe anyị anyaụfụ.
Ndị Galeshia 6
6:1 Na, ụmụnna, ma ọ bụrụ na a nwoke e mesịa ịda iwu ọ bụla, unu ndị mmụọ kwesịrị izi onye dị ka nke a na a spirit of leniency, ewere na unu onwe unu pụkwara iji nwaa.
6:2 -Ebu ibe n'ịbụ arọ, na otú a ka ị na-emezu iwu nke Kraịst.
6:3 N'ihi na ọ bụrụ na onye ọ bụla weere ya dị ka ihe, ezie na ọ pụrụ ịbụ ihe ọ bụla, ọ na-eduhie onwe ya.
6:4 Ya mere, ka onye ọ bụla nwapụta ọrụ nke ya. Na n'ụzọ dị otú a, ọ ga-ebube n'ime onwe ya naanị, na ọ bụghị na ọzọ.
6:5 N'ihi na onye ọ bụla ga-ebu ya ibu arọ.
6:6 Ma hapụ ya ka onye a na-akụziri Okwu ya kwuo banyere ya ya, onye nēzí ya nye ya, na kwa ezi ụzọ.
6:7 Adịghị ahọrọ na-awagharị awagharị. Chineke na-adịghị na-nsahi.
6:8 N'ihi na ihe ọ bụla a, nwoke ga-kụrụ, na kwa ga-enye ihe ubi. N'ihi na onye nāgha nkpuru na anụ ahụ ya, site n'anụ ahụ ọ ga-aghọrọ ire ure. Ma onye ọ bụla ghara mkpụrụ n'oge Mmụọ, site na Mọ ọ ga-aghọrọ mkpụrụ ndụ ebighi ebi.
6:9 Ya mere, ka anyị ghara ịdị eru ma na-eme ezi. N'ihi na mgbe oge ruru, anyị ga-aghọrọ mkpụrụ aghaghị.
6:10 Ya mere, mgbe anyị ka nwere oge, anyị kwesịrị ime ezi ọrụ n'ebe mmadụ nile nọ, ma nke kacha nke n'ebe ndị na-ezinụlọ nke okwukwe.
6:11 Tụlee ihe ụdị akwụkwọ ozi m dere na ị na aka m.
6:12 N'ihi na dị ka ọtụtụ n'ime gị dị ka ha chọrọ ime ihe dị n'anụ, ha amanye ka úgwù, kama ọ bụ naanị ka ha wee na-ata ahụhụ na mkpagbu nke obe nke Kraist.
6:13 Ma, Otú ahụkwa ka ọ na ha onwe ha, e biri úgwù, debe iwu. Kama, ha na-achọ ka ị na-úgwù, nke mere na ha nwere ike ebube n'anụ ahụ unu.
6:14 Ma Ya bụrụ m ka m otuto, ma e wezụga na obe nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, -esi n'ọnụ ụwa na-kpogidere m, na m n'ebe ụwa.
6:15 N'ihi na n'ime Kraịst Jizọs, ma ibi úgwù ma ọ bụ ebighị úgwù nkwenkwe n'ụzọ ọ bụla, ma kama e nwere ọhụrụ e kere eke.
6:16 Na Onye na-eso nke a na-achị: nwere ike udo na ebere n'elu ha, na n'elu Israel nke Chineke.
6:17 Banyere ihe ndị ọzọ, Ka onye nsogbu m. N'ihi na m na-ebu stigmata nke Onyenwe anyị Jizọs na ahu m.
6:18 Ka amara nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst nke na mmụọ gị, ụmụnna. Amen.